न घरभित्र चैन न बाहिर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २५, २०७६ मञ्जु भट्ट
काठमाडौँ — एक दिन कामविशेषले चाबहिल जानुपर्दा मैले एक कक्षा पढ्ने छोरालाई पनि सँगै लगेकी थिएँ । चाबहिल चोकमा उसले सडक पार गर्न मानेन । ‘स्कुलमा सरले जेब्रा क्रसिङबाट मात्र सडक पार गर्नू भन्नुभा’ छ, खै त जेब्रा क्रसिङ ?’ भन्दै ऊ यताउता हेर्न थाल्यो ।
शिक्षकले ‘परिवारसँग गएर ट्राफिक बत्ती र जेब्रा क्रसिङ हेरेर आउनू’ भन्नुभएको रहेछ । अति नै व्यस्त चोकमा एक ट्राफिक प्रहरीले धूलो खाँदै गाडीलाई सिटीको भरमा सञ्चालन गरिरहेका थिए । न कतै जेब्रा क्रसिङको निसान, न त ट्राफिक बत्तीकै ।
छोराले किताबमा पढेका कुरालाई व्यवहारमा देख्न पाएन, बरु बिजुलीका तारहरू पोल नै ढल्ने गरी अल्झेको भने देख्न पायो ! मर्मत–सम्भार गरेका ठाउँमा पनि काटेर फालिएका तारहरू कति दिनसम्म उठाइएका हुँदैनन् । यसले सवारी साधन र पैदल यात्रुहरूलाई असजिलो भएको हुन्छ ।
सडक बढीजसो सद्दे छैनन् । पाइलैपिच्छे भएका खाल्डाखुल्डीले दुर्घटनालाई अझै बढावा दिएका छन् । भर्खर मोटरसाइकल चलाउन थालेका युवाहरू आँखा चिम्लिएर हुइँकिने गर्छन्, जसका कारण स्कुल, अस्पतालअगाडि दुर्घटनाको हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । सडकपेटीमा हिंँड्नै नमिल्ने गरी तरकारी, फलफूल र लुगाफाटा बेच्न राखिएका हुन्छन् । मोटरसाइकल वर्कसप तथा घर निर्माणका सामग्रीले सडक उत्तिकै ओगटेका हुन्छन् ।
साथै व्यस्त सडकका दुवैतिर दुईपांग्रे र चारपांग्रेको अनधिकृत पार्किङबाट सडकमा सकस झन् थपिने गरेको छ । धूवाँधूलो बढी तर हरियालीको कमीका कारण सहरको मध्यभाग पुग्दा नै अक्सिजन अभावले सास फेर्न पनि मुस्किल हुने गरेको छ । जामका कारण गन्तव्यमा पुग्न सधैं ढिलो हुने गर्छ, जसबाट काठमाडौं उपत्यकावासी आजित भइसकेका छन् । घण्टौंको जामले उपत्यकाका मानिसको मात्रै होइन, पुलहरूको आयु पनि छोट्याइरहेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा एकदमै भीडभाड हुने गर्छ । महिला तथा किशोरीहरूले ठेलमठेलमा यात्रा गर्दा दुर्व्यवहार सहनुपरेको छ । एक दिन चाबहिलबाट साँगा महादेव मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा मैले देखें— गाडीको सिटमा एक किशोरी डल्लो परेर बसेकी छन् । एकातिरबाट भीडले र अर्कातिरबाट छेउकै सिटका व्यक्तिले उनलाई अप्ठ्यारो पारेका रहेछन् ।
ठाउँठाउँमा थुप्रिने फोहोर र त्यसको दुर्गन्धले उपत्यकावासीलाई इन्तु न चिन्तु पार्दै आएको छ । गर्मीयाममा वाग्मती र विष्णुमती लगायतको कुहिगन्धले घरभित्र पनि बस्न नदिने अवस्था सिर्जना गरेको म स्वयंले वर्षौं गौरीघाटमा बसेर झेलेकी छु । रक्सी, चुरोट खान टाढा जानुपर्दैन । घरैपिच्छे खोलिएका पसलमा चुरोट, गुट्खा र रक्सीको निर्बाध किनबेच देख्दादेख्दा बालबालिकाले बाटो नबिराउलान् भन्न सकिन्न ।
सार्वजनिक स्थान, पसल तथा सडकमा धूमपान गर्न नपाइने नियम बनेको धेरै भइसक्यो, तर व्यवहारमा लागू भएको पाउन सकिएको छैन । बाटोमा हिंँड्दै या चियापसलमा बसेर चुरोट तान्दै धूवाँको कुहिरीमण्डल बनाइरहेका युवाहरू तमाम देखिन्छन् । अरू त अरू, प्रहरी कार्यालयदेखि सय मिटरको दूरीमै यस्ता युवा भेटिने गरेका छन् । एक चियापसले भन्दै थिए, ‘एक गिलास चिया खान आउनेले पनि एक बोतल जारको पानी सिद्ध्याउँछ, अनि चुरोट नबेचेर के गर्नु त ? पानीको पैसा असुल्न भए पनि चुरोट बेच्नैपर्छ । चुरोट नबेचे चियापसल बन्द गरे पनि हुन्छ ।’ कस्तो विडम्बना !
घरबाहिर त निस्किसक्नु छैन नै, घरभित्रै पनि चैनले बस्न पाइन्न । चाबहिलमै धेरै अस्पताल घरहरूसँगै जोडिएका छन् । अस्पतालले बेलाबेला जेनरेटर चलाउँदा आउने धूवाँ, गन्ध र आवाजले हैरान हुने गरेको मेरा साथीसंगातीहरू बताउँछन् । बिहान एक छिन छतमा डुल्दा, कोठाभित्रै योग र व्यायाम गर्दा पनि जेनरेटरको प्रदूषणले बस्न खान नदिएको उनीहरूको गुनासो रहने गरेको छ ।
अर्कातिर, पार्टी प्यालेस लगायतको आतंक छ । राति बेलैमा सुत्न नदिने पार्टी प्यालेसहरूले बिहान पाँच बजेदेखि नै कसरतका लागि भन्दै ‘लडकी आँख मारे’ घन्काएर बालबालिकालाई मानसिक तनाव थपिदिने गरेका छन् । बिहानबिहानै जुम्बा डान्स, बेली डान्स गर्ने भन्दै चर्को स्वरमा त्यसरी गीत बजाउनेहरूले अरूको मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्न सके कस्तो जाती हुने थियो !
कुनै पनि काम रातारात गर्न सम्भव नहोला, तर सुधारका लागि आ–आफ्ना ठाउँबाट हरेकले स्वच्छ मनले प्रयास भने हरपल गरेकै हुनुपर्छ । लामो समयदेखि व्यग्रताका साथ देश विकासको पर्खाइमा बसेका नागरिकले कुराभन्दा काम देख्न सके राहत महसुस गर्ने थिए । नेतादेखि ठूलठूला व्यापारी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बस्ने भद्रगोल काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउन चौतर्फी पहल गर्नुपर्छ । ‘हाम्रो देशका सडकको पिचभन्दा त केटीले लगाएकै लिपस्टिक बढी टिक्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन दिइरहनु भएन ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:४१
महिनावारीले घर छोड्नु पर्दा...
कार्तिक १६, २०७६ मञ्जु भट्ट
पोहोर सालजस्तै यसपालि पनि चार दिनको कठिन यात्रापश्चात काठमाडौंबाट अछामको जामा फल्टाणे पुगियो  । यो चार दिनको गाडी यात्रा यत्तिधेरै अप्ठेरो र पीडादायी हुन्छ कि वर्णन गरिसाध्य छैन  । आर्मीकै सोर्सफोर्स लगाएर पाँचचोटि बसपार्क धाएपछि पाएको टिकट अमेरिकाको डीभी परेभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण थियो हाम्रा लागि ।
काठमाडौंबाट धनगढीका लागि छुटेको सुपर डिलक्स गाडीमा एसीको सुविधासँगै टेलिभिजन पनि थियो । फोहोर फाल्न गाडीभित्रै डस्टबिनहरू राखिएका थिए । मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधा थियो । फराकिला फोल्डिङ सिटहरू सजिला थिए । उल्टी आयो भने प्रयोग गर्नु भन्दै सिटसिटमा प्लास्टिकहरू राखिएका थिए । पानी पिउन प्रत्येक यात्रुलाई बोतलहरू बाँडिएका थिए ।
लम्कीबाट अछामतिर जाने गाडीमा भने झ्यालबाट उल्टी गरेर पूरै गाडीभित्र गन्हाइरहेको थियो । भुइँमा बसेका यात्रुको शरीर तथा सामानमै दसैंका लागि लगिएका बोका तथा खसीहरूले दिसापिसाब गरिरहेका थिए । आफ्ना लागि भने सामान तथा लोकल यात्रुहरू राख्न र ओराल्न जतिखेर पनि रोकिने गाडीमा साना केटाकेटीहरूलाई शौच आउँदा पनि रोकिएको थिएन ।
धेरैचोटि बच्चाहरूलाई बोतल र प्लास्टिकमा पिसाब गराएर झ्यालबाट बाहिर फालियो । थोत्रा गाडीमा टुटेफुटेका बांगिएका साँघुरा दुईजनाको सिटमा तीन जनासँगै बच्चालाई काखमा राखेर यात्रा गर्नु कष्टकर थियो । हावा पनि छिर्न नसक्ने छिनछिनमा रोक्दै गुडिरहेको गाडीमा २४ घण्टाभन्दा बढी लगातार यात्रा गर्दा थिल्लिएर जिउँदो लाससरह भएको थियो शरीर ।
कच्ची, हिलाम्मे सडकमा देशकै लामो नदी कर्णालीको तीरैतीर यात्रा गर्दा भगवान्को नामबाहेक अरू कुनै कुराको सम्झना आएन । मान्छेले चाहेको खण्डमा छोटो समयमा पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । लाखौं खर्च गरेर बीस वर्ष अगाडि कमलबजार विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । यदि त्यही रफ्तारमा काम भएको भए उहिले नै विमान उडिसक्थ्यो । देश विकासमा रत्तिभर ध्यान नदीने सरकारका कारण हामीहरू सकसपूर्ण तरिकाले गाडीमा यात्रा गरिरहँदा गाईवस्तुहरू त्यहाँ मजाले घाँस चरिरहेका थिए । यसै कारणले पन्ध्रको चाउचाउलाई बीस, बीसको कुरकुरे तीस र सयको सिमकार्ड एक सय बीस हालेर किन्नु हाम्रो बाध्यता बनेको छ ।
दैलेखको बाटो हुँदै अछाम जाने क्रममा बाटोमा थुप्रै पुलहरू निर्माण सुरु भएका थिए । बाह्र वर्षपछि त्यही बाटो जाँदा एक/दुईवटा बाहेक दैलेखको पातले खोलालगायत अरू ठाउँका पुल बनाउनेले पैंसा खाइसकेपछि अलपत्र छोडेको देखियो । सडकमा पहिरो खस्दा गाडी चलाउन एकदमै गाह्रो थियो । सुर्खेतको बडीचौरपछिको भयावह सडकका कारण रातिको एघार बजेदेखि उज्यालो नहुँदासम्म गाडी रोक्नुपरेको थियो । लामो रुटमा रातिको समयमा दुईजना चालक हुनुपर्ने भनिए पनि कहीँकतै लागू भएको देखिएन । घरसम्म जाने पाँच किलोमिटर सडक पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन नसक्दा हिलाम्मे धानखेत भएर पाँच घन्टा हिँड्नुपर्दा रातको नौ बजे घर पुगियो ।
घर पुगेपछि अर्को समस्या आइलाग्यो । बाह्र वर्षकी छोरी र सानो छोराले खुला ठाउँमा शौच नगर्ने भनेर ट्वाइलेट जाने जिद्दी गरे । वर्षौं पहिला शौचालय बनाउन आवश्यक सामग्री गाउँभरि नै वितरण गरिएको थियो । धेरैजसोले शौचालय बनाए पनि पानीको अभावमा प्रयोगविहीन छन् । खाना पकाउन र अन्य आवश्यक कामका लागि पनि टाढाको कुवाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण शौचालय प्रयोगमा ल्याउन नसकी शौचालयकै लागि टाढा खेतबारी वा खोलामा नै दौडनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सूचना जस्ता अत्यावश्यक न्यूनतम आवश्यकताहरू उपलब्ध नभएको ठाउँलाई नगरपालिका र सिंगो देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको देख्दा आवश्यक अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
गाउँमा अलिअलि पढेर खेती गरेर बस्ने केही युवाहरू पनि छन् । तर दुःखलाग्दो कुरा, यी अपवादमात्रै छन् । धेरैजसोले त बाह्रै महिना रक्सी खाने गरेको उनीहरूका परिवारले बताउने गरेका छन् । तीमध्ये एकजना नजिकका दाइ मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी थिए । दसैंको बेला एकैचोटि रक्सी र मासुले अस्पताल नपुर्‍याउँदै तीन वर्षअघि ४५ वर्षमै उनको निधन भयो । अर्का एकजना दाइ पनि अत्यधिक रक्सी पिउँछन् । दुईचोटि बेहोस् भएर ढलिसके । डाक्टरले उच्चरक्तचापका कारण यस्तो भएको हुँदा सावधानी अपनाउन र उपचार गर्न सुझाएका छन् । पैसाजति रक्सीमा सकिने भएकाले उपचार गर्न उनलाई आर्थिक अभाव छ ।
अर्का एकजनाको एकापट्टिको शरीर राम्रोसँग चल्दैन । लठ्ठीको सहारामा हिँड्छन् । तर, जे भए पनि रक्सी पिउन नछोड्ने कसम खाएका छन् । यस्ता कतिपय रक्सी पिउनेहरूका बालबच्चा टुहुरा र श्रीमती विधवा भइसकेका छन् । तैपनि अहिलेका युवाहरू सचेत हुन सकेका छैनन् । पुरुष र युवाले रक्सीले ढल्ने भएकाले रातविरात जंगली जनावरबाट खेतबारी जोगाउन महिलाहरूले खटिने
कसले पाल्ने गाई ?
छोराछोरी टाढिएकाले उमेर ढल्केकाहरूलाई अहिले गाई पाल्न नयाँ समस्या आएको रहेछ । गाई बूढो भएपछि के गर्ने ? बूढो गाई कसैले नलाने ! आफैले पैंसा दिएर कसैले लिएर गए पनि आफ्नै घर नजिकै भीरबाट लडाएर जाने वा खोलामा छाडेर जाने हुँदा झन् पीडा हुने उनीहरूको भनाइ थियो । गाईका साना बाच्छाहरूलाई मान्छे मरेपछि तेह्र दिनको काममा पुरोहितलाई दान दिने गरिन्थ्यो । अहिले पुरोहितले पनि लिएर जान छोडेपछि गाई ब्यायो भने बाच्छाहरू कसरी पाल्ने भन्ने ठूलो समस्या भएको छ । यस कारण अहिले साना अछामे गाईहरू देख्न मुस्किल हुने गरेको छ । यसै कारण भारतको झुलाघाटबाट आउने ठूला दुधालु गाई पनि अहिले आउन बन्द गरिएको रहेछ ।
बाटोले बिगार्‍यो बानी
सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लाका गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । गाउँ नै छियाछिया हुनेगरी काटिएका यस्ता सडकहरूले वनविनाश त गरेकै छन् गाउँलेहरूको हिँड्ने बानी पनि बिगारेको छ । एक किलोमिटर हिँड्न पनि ऋण काढेरै भए पनि सवारीसाधन चढ्ने गरेका छन् । केही समय अघिसम्म सबैजसो गाउँलेहरू आफूलाई पुग्ने तरकारी आफ्नै खेतमा उब्जाउँथे । अहिले थोरै पैसा हुनेले पनि सवारीसाधनको सुविधाले गाउँमै उब्जाउन छोडेर आलु, प्याज, टमाटरजस्ता तरकारीहरू किन्न थालेका छन् । जसका कारण दिनप्रति दिन खाद्यान्नको आयात बढ्दै गएको छ । विदेशबाट प्राप्त हुने सडेको खाद्यान्न उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने हो तर त्यो नभएर दिनप्रति दिन बढेको मात्रै छ ।
हाम्रा पूर्वजहरूले जीवनयापनका लागि चाहिने सबै आधारभूत कुराहरू त्यही ठाउँमा उत्पादन गर्न सक्थे भने अहिलेको युवाले नसक्ने, विदेशतिर मात्र हुँइकिने कारण खोज्न ढिला भइसक्यो । हैन भने असमान जनसंख्या वितरणले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय असन्तुलन भई देशलाई दूरगामी असर नपार्ला भन्न सकिन्न ।
महिनावारीका कारण छोड्नुपर्‍यो घर
तिहारसम्मै स्कुल बिदा भए पनि दसैं टीका सकिएसँगै एकखाले चिन्ताले सताउन थालेको थियो । तिहारसम्म घरमा बस्दा हामी दुइटै आमाछोरीको महिनावारी हुने पालो थियो । यही दसैंमा बिहे भएकी नन्दले आफ्ना दाइलाई यस्तै परिस्थितिका कारण अहिलेसम्म एकचोटि पनि तिहारमा टीका लगाउन पाएकी थिइनन् । हामी सबै धर्मसंकटमा थियौं ।
गएको एक दशकमा छाउपडी प्रथामा रत्तिभर परिवर्तन आएको देखिएन । अहिले पनि महिनावारी भएकी महिलालाई छ दिनसम्म घरभित्र पस्न दिने गरिएको छैन । गाउँमा रहेको एकमात्र छाउघरमा सुत्न जानुपर्छ । यदि त्यहाँ सुत्न ठाउँ भएन भने खुला आँगनको छेउमा वा पर गह्रामा पाल टाँगेर सुत्नुपर्छ । सहरमा महिनावारी हुँदा पलङमा आरामसाथ सुत्ने र आफूले प्रयोग गरेका तन्ना पनि धुन नमान्ने जम्मा बाह्र वर्षकी छोरीलाई चिसो अँध्यारो रातमा एक्लै घरबाहिर सर्प, कीराफट्यांग्रा आइरहने खलामा सुत्न लगाउनु र खोलामा गएर लुगा धोएर आऊ भन्नु मेरा लागि सोच्न नसकिने कुरा थियो ।
नजिकै अर्को नयाँ घर पनि बनाइएको थियो । त्यो घरको गोठमा गाईवस्तु बाँध्ने गरे पनि माथिल्लो तला खाली नै थियो । महिनावारी भएकी महिलालाई त्यो घरमा पनि ठाउँ थिएन । गाईवस्तुलाई गोठमा बाँध्न हुने तर महिनावारी भएकी महिलालाई गोठमा पनि बस्न नहुने भन्दा हामी महिलाहरूलाई जनावरभन्दा पनि तल राखिएको भान भयो । सँगैको घरको गोठमा सुत्न पाइन्छ कि भनेर सोध्दा एउटै घरमा सुत्दा लसपस हुन गई घरका बूढापाकालाई रिंगटा लागेर ढल्ने, खान मन नहुने, सन्चो नहुने, काम्ने, देवीको बाहन बाघ घरमा आई बाख्राहरू खाने अनिष्ट गर्ने हुँदा सुत्न मिल्दैन भनियो । हामी आमाछोरी घर बाहिर वा छाउघर सुत्न नमान्ने र घरकाले घरमा सुत्न नदिने अवस्था आएपछि तिहारअगाडि नै घर छोडेर हिँड्नुपर्‍यो । यतिमात्र हैन, महिनावारी हुँदा घरभित्र सुत्न पाइएन भने अर्कोपालिदेखि घरमै नआउनेसम्म पनि भनियो ।
मेरै देउरानी र छिमेकी एकजना देउरानी हेल्थपोस्ट र अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित न्यायल स्वास्थ्यमा काम गर्छन् । महिनावारी हुँदा परिवारविरुद्धमा बोल्न नसक्दा साना बालबच्चासहित छाउघर या घरबाहिर आँगनमा सुत्न बाध्य छन् । पश्चिमका कतिपय गाउँहरूमा महिनावारी हुँदा घरभित्रै पनि सुत्न दिने गरिएको छ । जस्तो मेरो माइती गाउँ बैतडीमा घरभित्रै सुत्छन् । दूध, दही, घ्यू, मही, दूधचिया आदि दूधबाट बनेका परिकारहरू भने त्यहाँ पनि खान दिइँदैन । पाँच दिनसम्म साह्रै कठोर गरी बार्नुपर्छ । योचाँहि घरकी बुहारीका लागि । घरकै छोरीहरूलाई भने छ दिनसम्म बार्न लगाइन्छ । मठमन्दिर, पूजाकोठामा जान नपाइने । धामीझाँक्री हिँडेको बाटोमा तर्केर हिँड्नुपर्नेजस्ता अप्ठ्याराहरू कायमै छन् ।
सासंदहरूले २०७६ सालमै छाउपडीमुक्त गर्ने धाराणा संसद्मा राखेका छन् । यसलाई महिला, बालबालिका मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लागू गर्ने बताएकी पनि थिइन् । महिला, बालबालिकासम्बन्धी संसदीय समितिले २ महिनाभित्र छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । महिनावारी हुँदा छाउघर बस्न बाध्न पार्नेलाई तीन हजार जरिवाना तथा तीन महिना जेलको सजायसहितको कानुन पनि बनेको छ । तर, जस्तै कानुन बने पनि लागू गर्न भने सरकारले पटक्कै सकेको छैन । कानुन बनाउँदैमा सबै कुरीति हट्दैनन् । हट्ने भए नेपालमा छुवाछुत उहिल्यै हटिसक्थ्यो ।
हाम्रा दिदीबहिनीले कहिलेसम्म ज्यान जोखिममा राखी छाउघरमा शरण लिनुपर्ने हो अत्तोपत्तो छैन ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ १०:२७